Madaxwayne ku-xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI oo tababar u furay macalimiinta ABE yada degmooyinka deegaanka. - Cakaara News
Madaxwayne ku-xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI oo tababar u furay macalimiinta ABE yada degmooyinka deegaanka.
Jigjiga(CN) Jimce March-13-2015. Madaxwayne ku-xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliiid Haayir xasan oo ay ku helinayaan wasiir ku xigeenka waxbarashada mudane cabdi jeedi iyo maareeyaha kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka mudane ahmed xabiib ayaa tababar u furay macalintiita ABE yada degmooyinka deegaanka Tababarkaasi oo lagu qabtay hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka ayaa. ujeedada tababarkan oo qayb ka ahayd sidii dadaalada kor loogu qaadayo awooda xirfadeed ee hawfudaydiyayaasha ee ka ka hawgala dugsiyada ABEyada degmooyinka deegaanka.
Waxaana furitaankii tababarka ka hadlay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane mawliid haayir xasan oo ka warbixiyay ahmiyada uu leeyahay tababarkani wuxuuna sheegay madaxwayne ku xigeenku in aan horumar ka la hirgalin Karin waxbarasho la aan. Xukuumada DDSI na ay dadaal xoogan ugu jirto tir tirida jahliga iyo saboolnimada.
Madaxwayne ku xigeenka oo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu yidhi” si loo sii karaar galiyo xawaaraha sare ee horumarka waxaa lagama maar maan ah in la soo saaro cudud waxbaratay oo dhexda u xidhata hirgalinta halganka loogu jiro kor u qaadida awooda xirfadlayaasha baristabaro ee degmooyinka deegaanka.
” Wuxuuna madaxwayne ku xigeenku ku booriyay macalimiintan uu tababarku u furmay in ay ka midho dhaliyaan cilmiga ay baranayaan si ay uga faa’iideeyaan degmooyinkii ay ka yimaadeen. Dhankooda wasiir ku xigeenka waxbarashada mudane cabdi geedi iyo maareeyaha kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI oo ka hadlay furitaankii tababarkaasi ayaa ka warbixiyay ahmiyada uu leeyahay tababarkaasi sheegayna dadaalada ay xukuumadu ugu jirto dabar gaynta jahliga iyo saboolnimada .
Tababarka ayaa socon doona mudao 7 maalmood ah ayaa waxaa cashiradiisa bixinaya khabiiro ka socday xafiiska waxbarashada DDSI